U Dhaqdhaqaaqayaasha Xuquuqda Muhaajiriinta Waxay Dhigayaan Banner Dhamaan Gobolka Ugu Yeedha Dib-u-habeynta Socdaalka - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Dhaqdhaqaaqayaasha Xuquuqda Muhaajiriinta waxay daadiyaan calammo guud ahaan Gobolka oo ku baaqaya dib u habeyn lagu sameeyo soogalootiga
Denver, CO - 9-ka Abriil, dhaqdhaqaaqayaasha socdaalka ee dhammaan gobolka Colorado waxay ku howlan yihiin ficil wadajir ah oo ay ku dalbanayaan xal sharci-dejin ah oo loo abuurayo waddo muwaadinnimo dhammaan muhaajiriinta aan sharciga lahayn. Waxay ku ridi doonaan boodhadhka cadaaladda socdaalka iyo cadaaladda ee goobaha dadweynaha ee guud ahaan gobolka, si ay uga dalbadaan maamulka iyo Koongareeska inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadoodii oo ay siiyaan 11 milyan oo khariidad ah muwaadinimada, xorriyadda masaafurinta, iyo gargaarka wadajirka ah ee dhammaan.
Dhacdadani waxay la jaanqaadi doontaa Dhaqdhaqaaqa Dib-u-habeynta Dib-u-habeynta ee Iimmigration (FIRM) Relay Guud ahaan Ameerika, ficillada waddanka oo dhan looga gudbinayo ee afarta toddobaad ee soo socda ka socda. Maaddaama Tooshka Xorriyadda ee loo maro gobolkeenna, Coloradans waxay kula biiri doontaa gobollada kale cod wadajir ah oo ay ku dalbanayaan muwaadinnimo dhammaan derisyada aan sharciyeysnayn.
Dhaqdhaqaaqa xuquuqda muhaajiriinta ee Colorado iyo wixii ka dambeeya wuxuu tobanaan sano ku dagaalamayay ilaalin joogto ah iyo muwaadinimo 11 milyan ee soogalootiga aan sharciga lahayn ee ku nool wadankeena. Muhaajiriinta waxay gacan ka geysteen dhisida bulshadayada waxayna raaceen dhaqankii Mareykanka ee ahaa inay nolol cusub fursad u helaan naftooda iyo carruurtooda. Haddana sidoo kale waxaa lagu qasbay inay ku noolaadaan qashin-qubka, oo aysan awoodin inay noqdaan muwaaddiniin buuxda waddanka ay ugu yeeraan guryahooda, in kasta oo shan milyan oo shaqaale muhiim ah oo aan sharciyeysnayn ay sii wadaan inay naftooda u biimeeyaan si dalkeennu u ilaaliyo.
Hadda, iyadoo la soo saaray biilasha socdaalka sida Sharciga Dhalashada Mareykanka, Sharciga Muwaadiniinta Muhiimka ah, iyo Sharciga Riyada iyo Ballan-qaadka miiska saaran, waa mid ka deg deg badan sidii hore ee saraakiishayaga la doortay ay ugu dambayntii caddaalad u siiyaan malaayiin qoys oo muhaajiriin ah guud ahaan dalka.
Yaa: Dagmada Boulder County Indivisible, CIRC, iyo kuwa kale ee u ololeeya xuquuqda soogalootiga oo dhan Colorado
Waa maxay: Banner-ka gobolka oo dhan ayaa hoos u dhigaya oo dalbanaya dhalashada dhammaan iyo caddaaladda muhaajiriinta
Goorma: Abriil 9, 8:00 subaxnimo ee Grand Isgoyska, 4:30 pm ee Longmont, iyo maalinta oo dhan meelaha kale
Xaggee: 435 Rood Ave ee Grand Isgoyska; 2525 W Alameda Ave, Denver; I-25 wuxuu dhaafaa meel u dhow Highland Drive, Longmont; iyo meelo kale oo ku yaal Denver iyo Koonfurta Colorado
maxaad: U dalbo maamulka iyo Koongareesku inay fuliyaan ballanqaadyadii la sameeyay oo ay siiyaan 11 milyan oo khariidad ah muwaadinimada iyo soo kabashada geesinimada leh ee COVID-19.